Hira ara-pilazantsara : tafajoro ny tarika TSA Madagascar | NewsMada
Hira ara-pilazantsara : tafajoro ny tarika TSA Madagascar
Par Taratra sur 27/04/2016
Tarika vaovao, hiditra amin’ny sehatry ny fiderana an’Andriamanitra an-kira, ny TSA Madagascar, ivondronana tanora fito mianadahy (telo vavy sy efa-dahy). Hampahafantarina amim-pomba ofisialy, androany ao amin’ny foibe toeran’ny Apokalypsy Ambodin’Isotry, ny fijoroan’ny tarika. Anio hariva manomboka amin’ny 3 ora tolakandro ny fotoana ary haharitra ora iray mahery.
Hatevina ny fandaharam-potoana amin’izany, raha ny nambaran’i Jason Glenn, tompon’andraikitra voalohany ao anatin’ny tarika. Hosokafana amin’ny famelaberan-kevitra arahina fampahafantarana ireo mpikambana mandrafitra ny tarika ny lanonana. Aorian’ izay kosa no hilazana sy hanomezana ny fandaharam-potoan’ny TSA Madagascar, mandritra ity taona 2016 ity. Hofaranana amin’ny fampahafantarana ilay rindran-tsary vaovao, nampitondraina ny lohateny hoe « Nandalo», izany.
Araka ny voalazan’i Jason Glenn hatrany, tanjona voalohany sy lehibe indrindra ny hahatafita ny Filazantsara any amin’ny tsirairay sy ny hiainany izany. « Na izany aza, tsy natao ambanin-javatra ny kalitaon’ity rakitsary vaovao ity, izay miavaka amin’ireo fahita andavanandro », hoy izy.
Vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny tarika TSA Madagascar sy ny trano mpamokatra Carllimage ny nahatontosana izao vokatra vaovao izao. Nomarihin’i Jason Glenn fa tsy voafehin’ny fiangonana tokana ny tarika TSA Madagascar fa misokatra amin’ny fiaraha-miasa amin’ny sokajin’olona rehetra.